Uyenza njani iFleet kwiTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani imoto kwi-twitter?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 401
Njengamanye amanethiwekhi onxibelelwano, i-twitter ibonelela ngothotho lwemisebenzi ephucula amava omsebenzisi. Inkqubo ye- iiflethi yimizekelo yale misebenzi.
I-Twitter Fleets ngumxholo wethutyana onokwabelana ngawo eqongeni, Njengakwi-Snapchat, Instagram okanye amabali e-WhatsApp. Ezi fleets ziboniswe phezulu ngemifanekiso yeeprofayili zomsebenzisi. Uphawu lwenqanawa entsha yezithuthi kuxa umfanekiso weprofayili ujikelezwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Ezi fleets zihlala kuphela iiyure ezingama-24. Xa abasebenzisi bebona ezi fleets, ukujonga kwabo kuyarekhodwa. Kule fleti, uya kuba nakho ukwabelana ngesicatshulwa, imifanekiso, ii-GIfs kunye neevidiyo
Iifleet zifumaneka kuphela kuhlobo olupheleleyo lwesicelo se-Twitter. Oku kubonakala kujikelezwe kumda wexesha weakhawunti yakho.
Abanini beakhawunti abaneenqwelo moya abazukufumana iimpendulo kwizixhobo zeemoto kwaye akukho mpendulo yoluntu, kodwa abasebenzisi baya kuba nakho ukuthumela umyalezo othe ngqo xa bengena kwizithuthi ukuba ubumbeko lwe Ubumfihlo beakhawunti yakho buyayivumela, okanye uphendule nge-emoji.
Iifleet ziya kukuvumela ukuba ukhankanye iiakhawunti zabanye abasebenzisi, kodwa ukusebenzisana nomxholo wabo akuvumelekanga.
Ngokusebenzisa iiflethi unokwazisa abalandeli bakho ngento oyenzayo ngalo mzuzu, ke basebenza kakuhle kakhulu ukunxibelelana neendaba ezisandula ukwenzeka ngexesha lokupapashwa, ukuze wandise ukubonakala kweprofayili yakho.
Ayizondaba zodwa, naluphi na ulwazi oluthathela ingqalelo olufanelekileyo, lunokufikeleleka ngokukhawuleza kwizithuthi kune-tweet kumgca we Imozulu.
Uyipapasha njani imoto
Uyilo lwezithuthi vele uye kwisangqa esivela phezulu ngasekhohlo konxibelelwano lwe-Twitter.
Ungabeka ezi ndlela zilandelayo: bhala isicatshulwa, layisha umfanekiso kwigalari yefowuni yakho, uthathe ifoto, okanye ividiyo ngexesha langempela.
Nje ukuba ugqibile ukuyila isithuthi, kufuneka ucofe i icon "fleet", ebekwe ngasekunene, kwaye izakupapashwa ngephanyazo.
Uyakwazi ukwabelana nge-tweet kwizithuthi zakho ngokucinezela i-icon kunye ne-ellipsis kwicala lasekunene le-tweet. Apho uyakufumana ukhetho lokwabelana njengezithuthi.
Unokucima izithuthi ngokungena kwi icon ye-ellipsis Phezulu kwizithuthi, ukhetho lokucima luya kuvela, ukuqhubeka nokucima.
Unako ukuthulisa iiflethi ngokusebenzisa "useto kunye nemfihlo" kwiakhawunti yakho.
Imigaqo yeFleets kunye neTwitter
Njengomxholo owuthumela ku-Twitter, iiflethi kufuneka zihambisane nemigaqo kunye nemigangatho yale nethiwekhi. Iqonga le-Twitter ligcina imbali yazo zonke iinqwelo ozishicilele.
Iakhawunti epapasha izithuthi ezaphula imigaqo ye-Twitter, isenokuba phantsi kwezohlwayo ezichazwa yile nkqubo. Kwangokunjalo, izithuthi ziya kuba phantsi komnini-akhawunti ukubhena kwesohlwayo.
1 Ukusetyenziswa kweenqanawa
2 Izibonelelo zeenqanawa.
3 Uyipapasha njani imoto
4 Imigaqo yeFleets kunye neTwitter
Indlela yokwenza i-ID yeprofayile yomsebenzisi kwi-Instagram?
Ndifuna ukwazi ukuba ndizisusa njani iintengiso kwiTwitch.